Madaxtooyada Soomaaliya Ayaa Waxaa Goor dhaw kafurmay Shirka Maamulka loogu sameynayo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe – STAR FM SOMALIA
Waxaa goor dhow xarunta Madaxtooyada ka furmay shirka Maamulka loogu sameynayo Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyadoo lagu wado in la saxiixo khariirada ama qorshaha maamulka loogu sameynayo gobolladaas.
Shirkan oo haatan ka socda Xarunta Villa Hargeysa, ayaa waxaa ka qeyb galaya, Madaxda dowladda, Wasiirada dowladda ee ka soo jeeda labada gobol, Maamulada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, Xildhibaanada labada dhinaca, odayaasha dhaqanka, Qaramada Midoobey, IGAD iyo xubno ka socda Beesha Caalamka.
Warar ku dhow dhow shirka ayaa sheegaya in laga soo saari doono goobta sida rasmiga loogu qaban doono shirka maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana la go’aamin doono xilliga uu furmayo.
Sidoo kale waxaa la filayaa in lagu magacaabo Guddiga farsamada ee wadaya howsha maamul u sameynta, iyadoo ay fududeyn doonto Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka.
Waxaa qorshuhu yahay in Maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe in la soo afjaro ka hor inta aanu sanadkan dhamaan, waxaana marka la dhiso uu ku biiri doonaa Maamul goboleedyada hada jira.